YIWU TOYS MARKET PRODUKS - Yunis International Trading Co., Ltd.
Ny kilalao Yiwu kilalao lehibe dia ahitana kilalao sariitatra, kilalao elektrika, kilalao fanatanjahantena, kilalao plush, kilalao vita amin'ny kilalao, kilalao jiro elektronika, kilalao tsy azo ihodivirana, kilalao biby, kilalao hazo ary kilalao alikaola.
MISY ZAVA-DALANA YIWU
1. Trano voalohany, Distrika 1, tsenan'ny varotra iraisam-pirenena: Lalao plush (Area C), kilalao tsy azo alaina (Area C), kilalao elektronika (Area C sy D), kilalao mahazatra (Area D sy E).
2. Yiwu fivarotana iraisam-pirenena Yiwu distrika 1: Ny gorodona voalohany dia mivarotra kilalao ary fatra farany ambany dia baoritra foana. Ny foibe dia ivon'ny Direct of Manufacture, izay mivarotra entana betsaka.
Yiwu distrika varotra iraisam-pirenena Yiwu distrika 1: Ny kilalao Area B Plush dia mirakitra ny Booth No.601-1200, kilalao Area C Plush, kilalao azo alaina ary kilalao elektronika dia manarona ny Booth No.1201-1800. Lalao D kilalao elektronika sy kilalao mahazatra hita ao amin'ny Booth No.1801-2400, ny kilalao Area E Ordinary dia mirakitra ny Booth No.2401-3000.
3. Ny kilalao lehibe sy kilalao lehibe avy amin'ny tsenan'i Guangzhou na Chenghai.